Fametrahana jiro LX1 Bias Fametrahana - Jiro MediaLight Bias
Tongasoa eto amin'ny pejy fametrahana LX1
Ahenao ny mety ho simba amin'ny LX1 vaovao anao. * Azafady mba vakio ity torolàlana fametrahana ity ary zahao ny horonan-tsary fametrahana fohy mandritra ny taona maro nifaliana.
* (Mazava ho azy, raha vaky ny LX1 anao mandritra ny fametrahana azy dia rakotra ao ambanin'ny Warranty 1-taona LX2 izy io, saingy afaka andro vitsivitsy vao hahazoantsika ampahany manolo anao).
Ireo kofehy varahina madio ao amin'ny LX1-nao dia mpamatsy hafanana sy herinaratra tena tsara, nefa malefaka be koa izy ireo ary mora rovitra.
Azafady mba avelao ny zoro ho malalaka kely ary aza tsindriana. (Tsy hiteraka aloka izany ary tsy ho faty ny jiro). Ny famerana ny zoro dia mety hahatonga azy ireo ho triatra.
Ok, miaraka amin'izay tsy an-dàlana, azafady mba jereo ny horonantsary fametrahana anay.
Azafady mba mariho: Raha miasa amin'ny horonantsary LX1 izahay dia mampiseho ny horonan-tsary fametrahana ho an'ny vokatra MediaLight. Ny fizotry ny fametrahana dia mitovy ihany, na dia misy aza ny endrika sasany tsy mitovy amin'ny vokatra.
Rehefa mametraka ny LX1 vaovao amin'ny fampiratiana anao, raha manodidina ny 3 na 4 ianao, ohatra, rehefa eo amin'ny rindrina ny fampisehoana anao:
1) refesina 2 santimetatra avy eo amin'ny sisin'ny fampiratiana.
2) Manomboha miakatra amin'ny ilan'ny fampisehoana eo amin'ny lafiny akaiky ny seranana USB, manomboka amin'ny POWER (plug) FARANY amin'ny tsipika.
Ho mora kokoa ny manapaka ny halavany be loatra rehefa vita ianao. Raha tsy manana seranan-tsambo USB ny fampirantianao dia manomboka miakatra ny fampisehoana amin'ny lafiny akaiky ny loharanon-kery, na tariby herinaratra na boaty ivelany araka ny hita amin'ny fampisehoana sasany. Raha eo afovoany mivantana io dia mamadiho farantsa iray. :)
Ny jironao dia voarakotra ao anatin'ny fiantohana maharitra 2 taona ary manarona fametrahana tsy feno izahay, noho izany aza manasatra be loatra. Raha manimba ny LX1 ianao dia mifandraisa aminay.
Raha mila manapaka ny halavany lava ianao, dia azonao atao ny manapaka azy amin'ny tsipika fotsy izay mamaky ny fifandraisana rehetra. Hetezo amin'ny tsipika etsy ambany:
Izany dia tokony handrakotra ny zava-drehetra ho an'ny fametrahana raha ny fisehoana dia eo amin'ny zoro na rindrina.
Raha mamaky an'ity ianao ary very hevitra tanteraka, aza matahotra. Mifandraisa amiko amin'ny alàlan'ny chat (zana ambany eto amin'ity pejy ity). Hanampy sary sy horonan-tsary bebe kokoa aho amin'ny andro ho avy. Hatsanganay ny LX1 anao ary hihazakazaka vetivety.
Mpanamboatra fahazavana Bias LX1,
MediaLight Bias Lighting ary
Mpamoaka ny zana-kazo Spear & Munsil